GEN: Samatar Ma Ahayn Dabadhilif Laakiin Dabadhilif Baa Duugtiisa Xaadiray!! WQ: Suldaan Cabdul Majiid | Voice Of Somalia
“Waan jeclaa in aan idin arko idinkoo mideysan oo cadowgiina cunaha kaga taagan laakiin ma arki doono sida ii muuqata” ayuu yiri ka hor inta uusan geeriyooni
“77-dii waad xusuusataan, daaqadaha Addis Ababa ayaanu garaacnay, maantana dakadda Berbera waxaa Xamaali ka ah Itoobiya, wax kale iskaba dhaafe” ayuu yiri Samater oo aad u qiireysan xilli uu ka hadlayey kulan uu kaga qeybgalay wadamada qurbaha.
Wuxuu isweydiiyey sababta dhalinyarada Soomaaliyeed ay qiiradii kaga tagtay oo ay dib u milicsan la’yihiin sharaftii iyo cizigii ay lahaayeen. Wuxuu dhalinyarada rag iyo dumarba ugu baaqay in ay ka dhiidhiyaan gumeysiga cusub ee kaga imaanaya Itoobiya iyo Kenya.
Markaan si wanaagsan u dhuuxay hadalada Samater, kuna noqnoqday markale iyo mar saddexaad waxaan aad kaga xumaaday in dabadhilif Xasan Sheykh oo kale ah uu Janaazo ku tukado Nin halyeey Samater oo kale ah. Waxaana dhowrjeer ku soo cel-celiyey oraahda ah “Samater dabadhilif ma ahayn……laakiin dabadhilif ayaa xaadiray duugtiisa”.
Koox ka mid ah hogaamiyeyaasha dabadhilifka u ah Itoobiya oo uu ugu horeeyo Xasan Sheykh Maxamuud iyo Ra’isul Wazaarihiisa Cumar Cabdi Rashiid iyo qaar ka mid ah waziirada maamul ku sheega Muqdisho ayaa Samater ku tukaday Salaadda Janaazada, kana qeybgalay aaskii loo sameeyey!! Waa kuwii baday ciilka iyo carada ee dhumiyey miraha halgankiisii, una fududeeyey Itoobiya in ay qabsato dalkeena markale.
Nin Geesi Samater oo kale ah ma mudan yahay in meydkiisa uu soo hor istaago dabadhilif la mid ah Xasan Sheykh Maxamuud? mise waxaa la waayey qof damiir leh oo Xasan ka horleexiyey safka, una sheega in uusan u qalmin ka qeybgalka duugta samatar?.
Halyeey ayuu ahaa midka saarnaa sariirta ee duugtiisa la isugu yimid balse kuwa ku tukanayey ayaan garan la’ahay wax aan ku tilmaamo. Ma dumar darees rageed soo xirtay mise duul dabinka Itoobiya nagu daayey?.